Ny toerana nisy azy talohan’ny nidinany teto ambonin’ny tany - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
Jaona 7:38 – 39 «38 Izay mino Ahy, dia hisy onin’ny rano velona miboiboika avy ao an-kibony, araka ny voalazan’ny Soratra Masina. 39 Ary ny Fanahy, Izay efa horaisin’ny mino Azy, no nolazainy tamin’izany; fa ny Fanahy* tsy mbola nomena, satria Jesosy tsy mbola niditra tamin’ny voninahiny. [* Na: Fanahy Masina] »
Io Jesosy Kristy io izany, dia hiverina any an-danitra dia hiditra amin‟ny toeram-boninahiny. Izany hoe io Jesosy Kristy io izany, dia niala avy tany amin‟ny voninahiny, talohan‟ny ny nidinany tety ambonin‟ny tany. Ary io voninahitryJesosy Kristy io izany no nialany tany an-danitra, ka dia tonga tety ambonin‟ny tany Izy. Izay fomba nialany tamin‟ny voninahiny izany, dia nananany izay voninahiny sy ny fahefan‟Andriamanitra izay talohan‟ny nidinany tety ambonin‟ny tany, fa rehefa tonga tety ambonin‟ny tany Izy, dia nialany izany fahefana sy ny voninahiny izany ary dia ny apostoly Paoly moa dia manamafy an‟izany:
Filipiana 2:5 – 11 «5 Aoka ho ao aminareo izao saina izao, izay tao amin’i Kristy Jesosy koa, 6 Izay, na dia nanana ny endrik’Andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra hofikiriny mafy ny fitoviana amin’Andriamanitra, 7 fa nofoanany ny tenany tamin’ny nakany ny endriky ny mpanompo sy nahatongavany ho manam-pitoviana amin’ny olona; 8 ary rehefa hita fa nanan-tarehy ho olona Izy, dia nanetry tena ka nanaiky hatramin’ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin’ny hazo fijaliana.
9 Koa izany no nanandratan’Andriamanitra Azy indrindra sy nanomezany Azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra, 10 mba ho amin’ny anaran’i Jesosy no handohalehan’ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny ety an-tany, na ny any ambanin’ny tany, 11 sy haneken’ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no Tompo ho voninahitr’Andriamanitra Ray. »
Izany hoe,ny voninahiny sy ny fahefany taloha, fony izy mbola tany amin‟ny Ray, dia nofoanany mba hananany ny fitoviana amin‟ny olona.
Inona moa no anton’izay?
Satria raha mbola izy mitondra ny voninahitr‟Andriamanitra sy ny fahefany no mifanerasera amin‟ny olona, dia tsy hisy olona na nofo hahazaka an‟izany. Tsy hisy olona afaka hahita azy, fa maty avokoa izay mifanerasera aminy, ary na dia tamin‟ny andron‟i Mosesy aza, dia tsy nisy olona mety hahazaka ny voninahitr‟Andriamanitra izany, satria hoy ny olona “aoka ihany ianao no hiresaka aminy fa ndrao dia ho maty izahay”Mahery vaika be ilay herin‟Andriamanitra sy ny teniny, ka tsy misy nofo mahazaka an‟izany, na dia isika izao aza tsy mahazaka an‟io. Ka mba hafahan‟Ilay tenin‟Andriamanitra tena mifanerasera mivantana amin‟ny olona rehetra, dia nofoanany ny fitoviany amin‟ Andriamanitra, fa nanetry tena Izy ary dia na hatramin‟ny fahafatesana aza, dia nandà ny tenany Izy ary nidina ambany dia ambany tokoa.
Fa rehefa vita kosa ny « mission » na ny iraka, na ny andraikitra nataon‟i Jesosy Kristy tety ambonin‟ny tany, dia nisy Fanahy izay nampanatenainy, fa omeny ary nilaza izany izy tao amin‟ny Jaona 7:39 « Ary ny Fanahy, Izay efa horaisin’ny mino Azy, no nolazainy tamin’izany; fa ny Fanahy* tsy mbola nomena, satria Jesosy tsy mbola niditra tamin’ny voninahiny. [* Na: Fanahy Masina] ». Izany hoe: rehefa mitsangana amin‟ny maty izany i Jesosy Kristy ka tafaverina amin‟ny voninahiny Izy, dia mirotsaka io Fanahy Masina io, ka ny porofo iray izay hamantarana fa efa tonga ao amin‟ny voninahiny izany i Jesosy Kristy, dia ny fahitana ny Fanahy Masina nirotsaka.
Inona ary ny zavatra mitranga?
Rehefa niakatra tany an-danitra i Jesosy Kristy, 40 andro taorian‟ny nahafatesany na ny Paska, dia nirotsaka ny fanahy masina, tamin‟ny andro Pentekosta. Ka matoa izany ny Fanahy Masina nirotsaka tamin‟ny andro Pentekosta, dia midika izany fa hoe tonga eo amin‟ny voninahiny izany i Jesosy Kristy. Satria ny voasoratra dia hoe: ny Fanahy tsy mbola nomena satria i Jesosy Kristy tsy mbola tonga any amin‟ny voninahiny. Koa satria i Jesosy Kristy mbola miaraka amin‟ny mpianatra rehetra eo, dia ireto apostoly ireto izay mbola niara-niasa sy niara-niaina tamin‟i Jesosy Kristy, dia mbola tsy nomena ny Fanahy Masina. Fa rehefa tonga tany amin‟ny voninahiny kosa Jesosy Kristy dia nirotsaka tamin‟izy ireo ny Fanahy Masina.